किन गोप्य बैठकमा व्यस्थ छन कांग्रेसका युवा नेताहरु ? - Sabal Post
किन गोप्य बैठकमा व्यस्थ छन कांग्रेसका युवा नेताहरु ?
२९ कार्तिक २०७५, बिहीबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
कात्तिक २९ काठमाडौं। नेपाली काँग्रेस संगठित भएर अगाडि बढ्न नसकिरहेका बेलामा युवाहरु एकजुट भएर अगाडि बढ्न कम्मर कसेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकाले काँग्रेस कमजोर भएको र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम नदेखिएको भन्दै सुजाता कोइरालाको घरमा ‘लञ्च मिटिङ’ भएको केही दिनपछि नै युवा पुस्ता तातेको हो। केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले बुधबार बोलाएको छलफलमा धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, गुरुराज घिमिरे, गगन थापा र जीवन परियार रहेका थिए।
भण्डारीले पहिलो दिन पाँच भाइलाई भेला पारे पनि आगामी दिनमा यो संख्या बढ्ने बताए ।
बैठकबारे भण्डारीले भने, ‘चुनौती बढिरहेका छन्। पार्टीभित्र आपसी द्धन्द्ध वृद्धि हुँदै गएको छ। विचार मर्दैछ। बलजफ्तीले प्रोत्साहन पाउँँदै गएका छन्। द्धन्द्ध समााधान गर्न, महासमिति बैठकमा नयाँ विचार र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै नयाँ चुनौतीको सामना गर्नका लागि सबैले आशा गरेको युवा पुस्ता जाग्नु जरुरी छ। पुरानो पुस्ता सरकार र प्रतिपक्षी भूमिकामा असफल भएको अवस्था छ। चेपुवामा परेको पुस्ताले यसरी नै मौन धारण गरे पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। नयाँ विचार जन्मदैन। सीमित व्यक्तिको स्वार्थको पिछलग्नु हुनेबाहेक विकल्प छैन भन्ने महसुसु गरेर एकातिर सरकारको किंतब्र्य विमुढको अवस्था र अर्कातिर पार्टीभित्र धनवानको वाहुल्यता समाधान गर्न युवा नेतृत्व अगाडि बढ्नु पर्छ भनी छलफल सुरु गरिएको हो।’
उनले थप स्पष्ट पारे, ‘हामी कहिल्यै ब्यक्ति भएर अगाडि बढेनौं समूह भएर अगाडि बढ्यौं, यो समूहले देशको बारेमा के भन्छ भन्ने हो । यसअघि पनि हामीले हाम्रा असन्तुष्टिहरु केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेकै थियौं । हामी सही मार्गमा छौं, सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्छौं।’ बुधबार भएको बैठकमा सकारात्मक छलफल भएको र अरु नेताहरु पनि आगामी बैठकमा समेटिने नेता भण्डारीले बताए। उनले आसन्न महासमिति बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने, विधानलाई कसरी सशक्त बनाउने, पार्टीका नीति तथा कार्यक्रम के हुने भन्नेमा पनि गहन छलफलमा लागेको बताए।
मलेसियन भेन्डरमाथि श्रम मन्त्रालयले लगाएको आरोप गलत…
महरालाई हिरासतवाट अस्पताल लगीयो
गुल्मी चारपाला सम्पर्क समाजद्धारा सहयोग प्रदान
हौसला हुनुपर्छ, जिन्दगी कुनैबेला पनि फल्न फुल्न…
भालुको बच्चा हिउँ परेको पहाड चढ्दै गरेको…